mai 2018 - Page 34 sur 66 -
Fifandonana tany Malaimbandy : Dahalo 5 lavon’ny zandary
17/05/2018 admintriatra 0
Dahalo miisa dimy no indray lavon’ny zandary sy ny fokonolona nandritra ny fifandonana niseho tany Ankitosa, fokontany Mahatsinjo, kaominina Malaimbandy ny alatsinainy lasa teo tokony ho tamin’ny 06 ora. Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana, …Tohiny
Fanampiana an’i Eric Fou Hehy : Nitondra ny anjara birikiny ny Soluma sy Fitoniana Tour
Ho fanampiana sy fankaherezana an’i Eric ao amin’ny tarika Fou Hehy amin’ny aretina mahazo azy, dia namangy azy teny amin’ny HJRA ny filohan’ny fikambanana Soluma Ravelomanantsoa Be-Rija sy ny filohan’ny fikambanana Fitoniana Tour, Sambahita François …Tohiny
Tsy marina ny filazana fa mikatso tanteraka fikarakarana taratasy eo anivon’ny tontolon`ny asam-panjakana manerana ny Nosy. Tsy mitombina ihany koa ny fanelezana fa nanakatom-baravarana sy hampikatso ny fampandehanan-draharaha rehetra ireo mpiasa eo anivon`ny minisiteran`ny Asam-panjakana, …Tohiny
Miezaka ny mitady hanaovana sorona hatrany ireo milaza ho depiote ho an’ny fanovana, izay ahitana ny avy amin’ny Mapar sy ny Tim. Araka izany, notanterahin’izy ireo omaly ny fandehanana teny amin’ny Oniversiten’Antananarivo eny Ankatso. Tamin’izany …Tohiny
Nitondra fanazavana mahakasika ny fanasoketana azy tany anaty tambazotran-tserasera sy tany anaty gazety mpivoaka isan’andro ary haino aman-jery sasantsasany Maurice Tsiavonana omaly tolakandro teny amin’ny trano fonenany teny Ambatobe. Nanambara ity mpanao gazety ity fa ...Tohiny
Masoivoho britanika Timothy Smart : Nankasitraka ny asa vitany ny Filoham-pirenena